U Thant and Global Challenges | uthanthouse
U Thant Speaks on Peace and Democracy
ဦးသန့်မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အထည်ချုပ်အလုပ်သမားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ (Amalgamated Clothing Workers of America) အား ၁၉၆၆ ခုနှစ် မေလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် “ဒီမိုကရေစီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး” ဆိုသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နူတ်ချက်ဖြစ်သည်။ အထည်ချုပ်အလုပ်သမားများသမဂ္ဂအဖွဲ့မှာ ထိုခေတ်အခါက ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်အားနှင့်ဩဇာအကြီးမားဆုံး အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့များထဲမှတစ်ခု ဖြစ်သည်။
“စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ရှေးဦးစွာ လျော်ကန်သည့် ယဥ်ကျေးမှု အနေအထားများ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအနေအထားများသည် အလိုအလျောက် ဖြစ်ပေါ်ရန် ခက်ခဲလှသည်။ အများက လက်ခံလိုက်နာသည့် အပြုအမူများ သာမက တူညီသော ဘုံရည်မှန်းချက်များ ရှိရန်လည်း လိုအပ်ပေသည်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် လူ့အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုလုံးက အများအကျိုး အတွက် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာသူများအား ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သောသူများ၏ သားကောင် မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးမည့် အဖွဲ့အစည်း ဌာနများ လိုအပ်သည်။ တည်ရှိနေသည့် ဘုံရည်မှန်းချက်များနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို လူ့အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုလုံးက လက်ခံဂုဏ်ယူပြီး အပြန်အလှန် လေးစားမှု ရှိရန် လိုအပ်သည်။ လူမျိုး၊ လိင်ဖြစ်တည်မှု၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနှင့် အတွေးအမြင်များပေါ်တွင် အခြေခံသည့် ခွဲခြားမှုအားလုံးကို ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုအပ်သည်။ လူနည်းစုများသည်လည်း တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရရှိရန် လိုအပ်သည်။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် လိုအပ်သည်။ မတူကွဲပြားမှုကို လက်ခံနားလည်ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့် အာဏာအင်အားရှိသူများ အပါအဝင် လူတိုင်းက မိမိကိုယ်ကို စောင့်စည်းခြင်း၊ သည်းခံနားလည်ခြင်းတို့ကို ကျင့်သုံးကြရန် လိုအပ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းပြီး တရားမျှတသော လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ဖြစ်လာရန် အတွက် ခိုင်မာတိကျသော ဥပဒေစနစ် လိုအပ်သော်လည်း ၄င်းဥပဒေများကပင် တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ချိုးနှိမ်ခြင်းနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို ပိတ်ပင်ခြင်း မပြုမိရန် လိုအပ်သည်။
နိုင်ငံရေး တက်ကြွနိုးကြားမှုနှင့် လူအများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့လည်း လိုအပ်သည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့် ရပ်တည်မှုတို့ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်သည်။ အချုပ်အားဖြင့် ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရန် အမြင့်မြတ်ဆုံးသော လူ့အရည်အချင်းများကို အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော အဖွဲ့အစည်း ဌာနများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ ပေါင်းစည်းထားရန် လိုအပ်ပေသည်။”
U Thant on Democracy : part ofaspeech by U Thant on “Peace and Democracy”, given on 21 May 1966 to an American union of garment workers (Amalgamated Clothing Workers), then one of the largest and most powerful trade unions in the world.
“A successful democratic system requiresanumber of preconditions. Most of them difficult in themselves to establish. It requires popular acceptance of circumstances of behavior and certain common objectives.
It requires the active cooperation of the community for the common good. It requires institutions which can ensure that those who obey the law will not become the victims of those who do not. It requires mutual respect andashared pride in the objectives and traditions of the community asawhole. It requires the absence of any form of discrimination based on race, sex, belief or opinion. It requires the fully equal treatment of minorities. It requires freedom of expression and tolerance of diversity. It requires especially from those who have power and influence restraint and patience. It requiresasystem of laws which are the same time effective enough to ensure peace and justice and not so restrictive as to humble enterprise or strangle opportunity. It requires political vitality and broad popular participation. It requiresaconstant reassertion of the place, work and dignity of the individual. In fact, it requiresacombination of the highest human qualities with the most skillfully developed institutions and traditions.”